3 avril 2020 – Trinitera Malagasy
3 avril 2020 Njara Pascal
Vakiteny I : Ezekiela 37,21-28, Tononkira : Jeremia 31,10.11-12ab.13, Evanjely : Md Joany 11,45-56. “Ny lehiben’ny Mpisorona sy ny Farisiana tamin’izay dia efa nandidy fa izay mahita ny itoeran’i Jesoa dia tsy maintsy milaza, mba hisamborany Azy” (and. 57). Toy izany no fiafaran’ny toko faha-11 amin’ny Evanjely nosoratan’i Md Joany. Tsy matahotra ny hajambàna sy ny habibian’ny…
(Mt 21,1-11 Taona A/ Mk 11, 1-10 na Jn 12,12-16 Taona B/ Lk 19, 28-40 Taona D). Isan-taona isika dia mankalaza, na ny marimarina kokoa mamerina ny fihobiana nataon’ireo mponin’i Jerosalema an’i Jesoa niakatra tao Jerosalema, henemana mialoha ny Paka (Mt 21,1-11 Taona A/ Mk 11, 1-10 na Jn 12,12-16 Taona B/ Lk 19,…